KANA Zvigadzirwa Fekitori | China KANA Zvigadzirwa Vagadziri uye Vatengesi
SMart-L40plus Mwenje yekuvhiya ye LED
Iine lens modular dhizaini, SMart-L ine yakakwana mumvuri-yemahara mhedzisiro uye inosangana yakawanda yekuvhiya inoda. Muviri wese wechiedza wakareruka uye zvinzvimbo nenzira kwayo.
SMart-L35plus Mwenje yekuvhiya ye LED
SL-P40 LED Mwenje Yokuvhiya
Iine maruva pedal dhizaini, SL-P40, SL-P30 inotungamirwa mwenje yekuvhiya inogona kupindura akawanda ekuvhiya anodikanwa kune ayo akasimba uye akangwara maficha.
SL-P30 Mwenje yekuvhiya ye LED
XHT-D Electro-Hydraulic Inoshanda Tafura
Yakakwana tafura yekushandisa, iine magetsi ekupusha tsvimbo, inogona kugutsa masangano ekurapa kudiwa pane inokwana-mutengo mugove, ruzha rwakaderera, kunonoka uye kudzikama kushanda, kuvimbika kwakanyanya uye kugadzikana.
XHT-B Magetsi Anoshanda Tafura
Yakadzikama-H7000 Electro-Hydraulic Inoshanda Tafura
Iine echinyakare zvikamu zvishanu dhizaini, STable-H7000 inogona kupindura akawanda ekuvhiya zvinodiwa. Iyo yakakwira mutengo-inoshanda chiyero chigadzirwa mukushanda tafura musika.
SEcure-U ICU Kurapa Kurembera Bridge
Iyo SEcure Medical Hanging Bridge inopa yakachengeteka uye yakakwirira hunyanzvi chikuva cheICU, CCU, PICU, NICU uye zvichingodaro SEcure-U ndiyo modhi yakagadzirirwa neakakamurwa akaomeswa uye akanyorova mativi.
Secure-SJW Yokuvhiya Pendant
Chiremba pendant yakajairika inoshandiswa mune yekuvhiya mukamuri, ICU uye yekuendesa imba. Inopa kurodha chikuva, sosi yemhepo uye magetsi kune inoenderana michina yekurapa. SHINVA Secure-SJW mechiniki yekuvhiya pendant ine Imwe kana Dual-ruoko inopa yakachengeteka, yakakwirira inoshanda uye yakachena nharaunda kune vanachiremba nanamukoti.
SEcure-H ICU Kurapa Kurembera Bridge
Iyo SEcure Medical Hanging Bridge inopa yakachengeteka uye yakakwirira hunyanzvi chikuva cheICU, CCU, PICU, NICU uye zvichingodaro SEcure-H ndiyo modhi yakagadzirirwa pamwe yakasanganiswa yakaoma uye yakanyorova zvikamu.